Fanontaniana: Ahoana ny fahitana trondro anaty rano - BikeHike
Home » Miscellaneous » Fanontaniana: Ahoana ny fahitana trondro anaty rano
Posted on Desambra 5, 2021 By Danna
Ahoana no fahitanao trondro ao anaty rano?
Inona no solomaso hitanao trondro ao anaty rano?
Ahoana no ahafantaranao ny toerana hanjonoana?
Aiza no hita ny trondro?
Inona no loko tsara indrindra ho an'ny rano?
Tsara kokoa ho an'ny jono ve ny solomaso misy fitaratra?
Tena miasa ve ny solomaso fanjonoana?
Ahoana no fahitanao anaty rano tsy misy solomaso?
Manampy amin'ny fahitana amin'ny rano ve ny lens polarized?
Afaka mitsoraka amin'ny solomaso ve ianao?
Mahasarika trondro ve ny tongolo gasy?
Ny bubbles ve dia midika hoe trondro?
Inona no fotoana tsara indrindra hanjonoana?
Matory ve ny trondro?
Aiza no miafina ao anaty ranomasina ny trondro?
Inona no trondro lehibe indrindra hita hatramin'izay?
Inona no family tsara indrindra ho an'ny jono?
Tsara ho an'ny jono ve ny lens GREY?
Tsara kokoa amin'ny fanjonoana ve ny family manga na maitso?
Mitadiava trondro mavitrika midina avy any amin'ny faritra tsy ara-dalàna amin'ny morontsiraka, na fivontosana na fisondrotana hafa hitanao, toy ny andian-bato mitsambikina ao anaty rano. Ny trondro dia hihazona ny riandrano miadana ao ambadiky ny sakana toy izany, ka azonao antoka fa eo izy ireo na tsy hitanao misakafo izy ireo.
Ny solomaso polarized dia manampy amin'ny fampihenana ny hazavan'ny masoandro rehefa midona amin'ny rano. Miaraka amin'ity glare ity dia afaka mahita ny rano ianao. Tombontsoa lehibe ho an'ny mpanjono izay manjono rano marivo eny amin'ny farihy na tia manjono amin'ny rano mikoriana amin'ny renirano sy renirano.
Mitadiava tsy fanarahan-dalàna amin'ny sisiny izay mampifantoka ny trondro. Tadiavo ny tendron'ny teboka lava mipaka any amin'ny farihy, izay milatsaka tampoka any anaty rano lalina. Ny sisin'ny tsimparifary amin'ny ankapobeny dia manintona trondro. Mety hihazona trondro ny toerana misy hazo miampita na mandrafitra banga kely.
Ny trondro dia hita saika na aiza na aiza misy rano misy sakafo ampy, oksizenina ary rakotra. Eo akaikin'ny tranonao dia tokony hisy rano misy trondro ao anatiny. Fa mba hisambotra trondro, aloha dia tsy maintsy mianatra hahatakatra ny toerana niafina. Tsy ny trondro rehetra no afaka miaina anaty rano mitovy.
Raha hivoaka an-drano mandritra ny andro ianao, ny tsara indrindra dia ny loko volondavenona polarized. Ity karazana family ity koa dia tonga lafatra amin'ny rano manga lalina, manakana ny glare, ary mamela anao hahita tsara kokoa ny rano.
Tsara ho an'ny mpanjono ny solomaso misy fitaratra, satria manampy amin'ny fampihenana ny tara-pahazavana amin'ny taratry ny tara-masoandro izy ireo, izay mahatonga ny fahitana tsara kokoa sy ny tsy fahampian'ny maso.
Ny solomaso fanjonoana polarized dia afaka manampy amin'ny fiarovana tsara ny masonao. Ny solomaso fanjonoana polarized dia afaka manakana ny taratra ultraviolet na taratra UV, mba tsy hanimba ny masonao. Ny taratra UV dia mety hanimba faritra maro amin'ny maso, anisan'izany ny fahasimban'ny cornea. Izy ireo koa dia miteraka katarakta, photokeratitis ary kilema maso hafa.
Raha manao solomaso na contact ianao dia azonao atao ny mametraka ny taratasinao ao anaty saron-tava. Ny fanaovana saron-tava mitsoraka dia fomba azo antoka kokoa hijerena izay ao anaty rano noho ny fanokafana ny maso, ary tsara indrindra ho an'izay tsy afaka mahita tsara raha tsy misy solomaso.
Ny zava-misy: Ny tara-masoandro eny amin'ny ranomasina (sy ny eny ambonin'ny tany hafa) dia mipoitra be! Fanampin'izany, ny taratra rehetra avy amin'ny zavatra ambonin'ny rano dia mipoitra amin'ny ampahany. Miaraka amin'ny solomaso polarized ny ranomasina dia miseho mangarahara kokoa!.
Scuba Diving miaraka amin'ny solomaso (solomaso) Tsia, tsy afaka manao scuba miaraka amin'ny solomaso ianao. Ny famolavolan'ny solomaso dia midika fa ny sandrin'ny solomaso mipetaka eo amin'ny sofinao dia tsy mamela ny plastika na silisiôna zipo amin'ny saron-tava antsitrika hanisy tombo-kase amin'ny tavanao.
Ny valiny fohy dia eny, trondro toy ny tongolo lay, saingy misy mihoatra noho izany. Asehon'ny fanadihadiana fa manana fofona mahery ny trondro sasany. Fantatra fa avo 1,000 heny noho ny an’ny alika ny fahaizan’ny trondro mamofona. Efa am-polony taona maro no nampiasain’ny mpanjono ny tongolo lay ho an’ny haniny satria tena mafy ny fofony.
Mila oksizenina ny trondro mba ho velona. Raha feno akora simika misy poizina, toy ny chlorine sy amoniaka ny tanko, dia mahazo oksizenina manokana ny trondro amin'ny alalan'ny mitsingevana eny ambonin'ny tany sy mitsoka bubbles. Izany dia famantarana fa tandindomin-doza ny trondronao. Rehefa maka oksizenina avy ao anaty rano ny trondronao dia mamoaka gazy karbonika.
Fotoana tsara indrindra hanjonoana vao maraina. 6:00 maraina ka hatramin'ny 9:00 maraina tara ka hatramin'ny tolakandro. 9:00 maraina hatramin'ny 1:00 tolakandro ka hatramin'ny hariva. 1:00 ka hatramin'ny 5:00 hariva
Na dia tsy matory amin'ny fomba torimason'ny biby mampinono an-tanety aza ny trondro, dia miala sasatra ny ankamaroan'ny trondro. Asehon'ny fikarohana fa ny trondro dia mety hampihena ny asany sy ny metabolisma nefa mitandrina hatrany amin'ny loza. Misy trondro mitsinkafona amin'ny toerana misy azy, ny sasany mihidy amin'ny toerana azo antoka ao anaty fotaka na haran-dranomasina, ary misy aza mahita akany mety.
Any amin'ny faritra amorontsiraka, akaikin'ny morontsiraka, ny fanambanin'ny ranomasina dia rakotra fasika indrindra fa mety misy ampahany amin'ny vatolampy mibaribary ihany koa. Ny trondro dia miaina amin'ny halaliny rehetra ao anaty rano amoron-tsiraka, fa ny ankamaroany dia mijanona eo akaikin'ny farany ambany. Maro no misakafo eo akaikin'ny sarona, toy ny vatolampy na haran-dranomasina, izay ahafahany manafika haza.
Inona no trondro lehibe indrindra tratra? Araka ny rakitsoratry ny IGFA, ny trondro lehibe indrindra tratra trondro dia ny antsantsa fotsy lehibe izay milanja 2,664 pounds (1,208.389 kg.). Tratra ny morontsirak'i Ceduna, Aostralia, tamin'ny 1959, 50 minitra monja no nitondran'ny angler Alfred Dean ilay ady tamin'ity antsantsa iray taonina ity.
Araka ny voalazanay tetsy ambony, ny lens varahina (volontsôkôlà na amber) dia mety tsara amin'ny fanjonoana maso. Misy lafin-javatra iray hafa tokony hodinihina koa: ny toe-pahazavana manodidina anao. Na manjono maso ianao na tsia, raha manjavozavo ny andro, manjavozavo na koa "fahazavana ambany", dia ho faly kokoa ianao raha manao ny family varahina.
Ny loko volondavenona dia tsara indrindra ho an'ny fanjonoana any an-dranomasina izay mafana sy mafana ny masoandro satria manome fiarovana indrindra izy ireo. Raha mankany amin'ny rano misokatra ianao ary mila manao laharam-pahamehana ny fanakanana hazavana noho ny fanatsarana ny loko, ny volondavenona no fakantsary tsara indrindra ho an'ny jono.
Ho an'ny any ivelany, ny fitaratra manga no lalana tokony haleha. Ho an'ny ranomamy sy an-dranomasina, ny fitaratra maitso sy ny varahina dia safidy tsara. Ho an'ny hazavana maivana amin'ny maraina na amin'ny hariva, ny fitaratra volafotsy fiposahan'ny masoandro dia tonga lafatra. Ny loko volondavenona no safidy tsara indrindra ho an'ny asa andavanandro.
Fanontaniana: Azo atao ve ny mitafy lantihy mifandray amin'ny trondro
Fanontaniana: Nahoana ny Iss no mampiasa leson-trondro
Fanontaniana: Inona no atao hoe trondro rano mangatsiaka
Inona ny rano mari-pana ho an'ny trondro Betta
Inona no rano ilain'ny trondro Betta
Inona no trondro mitsambikina avy ao anaty rano
Inona no tsara trondro rano mangatsiaka
Fanontaniana: Inona no sakafon'ny trondro ao anaty rano
Fanontaniana: Inona no sakafon'ny trondro an-dranomasina
Inona ny mari-pana ny rano Betta Fish
Valiny haingana: Trondro Anjely ve Rano Mamy sa Trondro Rano Masira
Valiny haingana: Afaka mampiasa lantihy jamba miloko ve ny alika
Azo ampiasaina amin'ny jono ve ny Lenses Transition
Previous Post: Fanontaniana: Tokony ho hafana ve ny rano ho an'ny trondro Betta
Next Post: Valiny haingana: Mety ve ny rano voadio ho an'ny trondro Betta